नेपाल आइडलमा आज टप ५ को छिनोफानो हुदैः प्रमिला राईको यस्तो छ अनुभव - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
#कुरा यस्तो पो !
सानो पर्दा /ठूलो पर्दा
बेश्याको भूमिका निर्वाह गर्न गाह्रो– शिल्पाको ‘लज्जा’अनुभव
जितुले शुरु गरे ‘रामकहानी’को छायाकंन
‘कान्छी’लाई चौतर्फी तारिफ
किक्रेट र प्रेममा अडिएको ‘भद्रगोल’
गफगाफमा आजको सिनेमा ‘लज्जा’
सपनीमा आउनेलाई सम्हालेर राख्दै प्रियंका
गीत संगीत गफ
बर्थ डे / एनिभर्सरी
१ भाद्र २०७४, बिहीबार १८:११ 14
एपी.वान. टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको कार्यक्रम नेपाल आईडलमा अब छ प्रतिस्पर्धी बाँकी छन । आज टप ५को छिनोफानो हुदै छ । अघिल्लो साता नेपाल आडईलको मन्चबाट टप सातमा पुगेर काठमाडौँकी प्रमिला राई आउट भईन । नेपाल आईडलको मन्चबाट निस्किएको केहीदिनमा रेडियो अडियो आईपुगेकी प्रमिलाले गफ.गाफ. संग नेपाल आईडलमा आफ्नो यात्रा र प्रतिस्पर्धीहरुका बारेमा आफनो अनुभव साटेकि छन ।
विजेता नभएपनि टप सात सम्म पुग्न पाउँदा खुशी
मेरो पुर्खौली घर पाँचथर भएपनि मेरो जन्म काठमाडौँमा भएको हो । नेपाल आईडलको मन्चबाट म टप सातबाट आउट भए । बिजेता नभए पनि मलाई आफू टप पाँच सम्म पुग्छु जस्तो लागेको थियो । तर, त्यो भएन । तर, पनि त्यसमा दुखी भने छैन । मलाई त्यस्तो फरक नपरेपनि मेरो समर्थकहरु भने म आउट हुदाँ निकै दुखी हुनुभएको थियो । फोन नम्बर हुनेले फोन र फेसबुकमा साथी भएकाहरुले रोएको फोटोहरु पठाउनु भएको थियो । म निस्किएको एक षडयन्त्र हो भनेर धेरैले भन्नुभयो । मेरा शुभ चिन्तक भएको कारण उहाँहरुलाई निर्णयमा चित्त नबुझेको हुन सक्छ । म उहाँहरुकै भोटले टप सात सम्म त आईपुगे नि । म त्यसमै खुशी छु । तर, नेपाल आईडलमा सबै कुराको हात पब्लिक र भोट माथी थियो । यसमा केही पनि जालझेल भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । धेरैले भोटिङ्ग सिस्टम देखाउनु पर्यो पनि भन्नुभएको छ । तर, कार्यक्रमको फरम्याट अनुसार भोटिङ्ग देखाउन पाईदैन । हामीले सबै कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन सक्नुपर्छ ।
ब्याङ्गकर हुदै गायकी यात्रा निकै रमाईलो
नेपाल आईडल एउटा ट्यालेन्ट शो हो । म माथी केही थियो होला त्यही भएर म टप सात सम्म पुग्न सके । यसमा मलाई मेरो जज र फ्यान हरुले धेरै साथ दिनु भयो । म आउट नभएको भए त्यो दिन अर्को कोही साथी निस्कनु हुन्थ्यो । मनमा आफू अगाडी पुगौँ भन्ने त लागि हाल्छ नि र आउट हुदाँ म नरोए पनि मन–मनै दुख भने लाई रहेको थियो । आउट भएर पनि हामी घर होईन होटेल जानुपर्छ । होटेल पुगेपछि मलाई घरबाट फोन आयो । उहाँहरुले मलाई त्यहाँ सम्म पुग्नु नै ठूलो कुरा हो; चिन्ता नमान भनेर सम्झाउँनु भयो । घरमा आएपछि सबै जना भएर सेलिबे्रट गरौँ भन्नुभयो । म घर पुगेपछि सबै जना धेरै खुशी हुनुभयो ।
मैले नेपाल आईडलमा आउने समय संगीत सिकेको थिईन । संगीत नसिकेपनि म यहाँ सम्म आउन सफल भए । अडिशनमा पनि सेलेक्ट हुन्छु जस्तो लागेको थिएन । मेरो कोही गायन क्षेत्रमा नभए पनि गीत गुनगुनाई रहनुहुन्छ । नेपाल आईडलमा म नआएको भए मेरो यो कला मैले घरमा र अफिसको कार्यक्रममा मात्र सिमित राख्नु पथ्र्यो । नेपाल आईडलमा आएपछि मेरो पहिचान बदलियो । तर, त्यहाँ जानु अघि म लक्ष्मी ब्याङक माका गर्थे । अहिले भने म अफिस नगएको चार महिना भयो । अडिशनमा जाने क्रममा अफिसबाट मैले एक हप्ताको छुट्टी लिएको थिए । थाहा थिएन म यहाँ सम्म आईपुग्छु भनेर । त्यसपछि छुट्टी बढाएको बढाई गर्दा यहाँ सम्म भयो । तर, अफिसबाट मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ ।
होटल बस्दा गरेको रमाईलो र मज्जा कहिल्यै बिर्सिन्न
मेरो फ्यानहरु एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ । उहाँहरुले मलाई म्यासेज पठाउनुहुन्छ । उहाँहरुले मलाई राम्रो तथा नराम्रो प्रतिक्रिया दिने गर्नुहुन्छ । होटेलमा हुदाँ मलाई फूलको बुकेहरु पठाउँने गर्नुहुन्थ्यो । बुकेमा नाम भने कहिल्यै लेखेको हुदैन्थ्यो । यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला भन्न चाहन्छु । म प्राय सबैको फोन सम्पर्कमा रहन्छु । परिवारमा मेरो कुरा पनि धेरैले बुझिदिनु हुन्छ । होटेलमा त्यत्रो समय संगै बस्दा पनि हामीले एक अर्का संग कहिल्यै झगडा गरेनौ । सबै जना सगै हुदाँ हामी गीत गाएर, जोक्स भनेर र हल्ला गरेर बस्ने गथ्र्यौ । जोक्स भने धेरै सुजाताले भन्ने गर्थि । उसले एक दमै हसाउने जोक्स भन्छे । ऊ मेरो रुम मेट पनि हो । उसले आफ्नो जोक्समा भने ध्यान पुराउनु पर्छ (लामो हासोँ) । उसको जोक्स हाम्रो अभ्यासको समय पनि चालु हुन्थ्यो । गम्भिर हुनुपर्ने ठाँउमा पनि उसले मलाई जहिल्यै जोक सुनाएर हसाँउने । म फेरी गम्भिर हुनै सक्दिन । हाँसी राख्छु ।
छुटेर आउने बेलामा त जोक्सहरु केही पनि भनेन । राम्ररी बिदाई गरेर आए । नेपाल आईडलमा कसैको पनि नराम्रो बानी छैन । म सगै बटममा आउने प्रताप दास पनि निकै रमाईलो छ । प्रताप एकदमै मिल्छ । कसैले हामीले भनेको कुराहरु नकारात्मक रुपमा पनि लिन सक्छन । तर, ऊ केही कुरा पनि नकारात्मक रुपमा लिदैँन । मेरो रहर म्यूजिकमा केही गर्नु छ । मैले उचाईको शिखर चुम्न पाउँछु पाउँदिन भन्ने कुरा मलार्ई थाहा थिएन । तर, जहाँ छु त्यसको लागि एकदमै खुशी छु । माया र सपोर्ट जहिले यस्तै कायम रहोस भन्न चाहन्छु ।
ए मेरो हजुर २ को नयाँ गीत सार्वजनिक
लिलिबिलीमा प्रदीप पक्का पारिश्रमिक २२ लाख दावी
ति पल सम्झिदा पछुतो लाग्छ– जस्मिन श्रेष्ठ
मेरा केही साथी जेलमा छन्– आर्यन अधिकारी
भाई जन्मिदा यो काले को हो भनेर रोएँ —केकि अधिकारी
लण्डनमा हुने ‘टप मोडल वर्ल्डवाईड २०१८’ प्रतियोगितामा नेपालका निशान…
'म्यानहन्ट नेपाल २०१६'का मिस्टर पर्सनालिटी तथा 'टप मोडल नेपाल २०१८' विजेता निशान चौहान लण्डनमा हुने 'टप मोडल…
मोबाइल चलाउन पाएपछि निन्द्रै हराउथ्यो – गायिका बिन्दु परियार
कपडामा मात्र महिनामा डेढ लाख खर्च गर्छन आर्यन सिग्देल
यसरी भयो शिव परियारको विहे
२१ पुष २०७४, शुक्रबार
© 2017 - All Rights Reserved. Gufgaf.com